Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Kazakhstan » Ny sidina avy any Kazakhstan dia hiverina any amin'ny firenena 16 hafa izao
Airlines • Airport • Aviation • Azerbaijan Breaking News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany Italia • Vaovao Mafana Kazakhstan • Vaovao Mafana Koety • Vaovao Mafana Maldives • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Vaovao Mafana Sri Lanka • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Turkey Breaking News • Vaovao farany UAE • Vaovao Mafana Ozbekistan
Ny komisiona avy amin'ny governemanta dia nanapa-kevitra ny hampiakatra sy hanohy ny serivisy serivisy iraisampirenena mahazatra avy any Kazakhstan mankany amin'ny firenena 16 manerantany miaraka amin'ny sidina 114 sidina isan-kerinandro.
Nanambara ny tompon'andraikitra amin'ny governemanta Kazakhstan fa hiverina ny serivisy serivisy amin'ny firenena maromaro.
Ny mpitatitra Kazakh dia hampitombo ny zotra fandosirana mankany Rosia, Torkia, Ozbekistan, Alemana ary Emira Arabo Mitambatra.
Ny sidina avy any Kazakhstan mankany amin'ny Repoblika Tseky, Sina, Italia, Sri Lanka, Koety ary Azerbaijan dia manomboka ihany koa.
Nanambara ny tompon'andraikitra avy amin'ny vaomiera iraisam-pirenena Kazakh momba ny fisorohana ny valanaretina coronavirus fa afaka miondrana amin'ny firenena 16 hafa ny mponina Kazakhstan manomboka amin'ny 21 septambra 2021.
Nanapa-kevitra ny komisiona ny hampiakatra sy hanohy ny serivisy serivisy iraisam-pirenena mahazatra any amin'ny firenena 16 manerantany miaraka amin'ny sidina 114 sidina isan-kerinandro.
Noho izany, Kazakhstana nampitombo ny tahan'ny sidina mankany Rosia 54, 7 ho any Torkia, 9 ho an'ny Emira Arabo Mitambatra, 5 mankany Ozbekistan sy Alemana, ary 3 ho any Maldives, hoy ny Telegram Channel an'ny Komitin'ny sidina sivily Kazakh.
Nanohy ny sidina tany Czech Republic, China ary Azerbaijan i Kazakhstan. Ankoatr'izay, hisy sidina avy any Kazakhstan mankany Italia indroa isan-kerinandro, ary sidina avy any Kazakhstan mankany Sri Lanka ary Koety dia intelo hatramin'ny herinandro.
Mpitatitra saina Kazakhstan, Air Astana, androany dia nanambara ny famerenana ny sidina mivantana avy any Almaty mankany Male (Maldives) manomboka amin'ny 9 Oktobra 2021. Hatao inefatra isan-kerinandro ny sidina amin'ny talata, alakamisy, sabotsy ary alahady amin'ny Airbus 321LR sy Boeing 767.
Air Astana dia nandefa sidina nankany Maldives tamin'ny 5 Desambra 2020, ary miasa hatramin'ny 24 Mey 2021 alohan'ny fampiatoana noho ny fameperana ataon'ny governemanta. Araka ny filazan'ny Minisiteran'ny fizahantany any Maldives, laharana fahadimy i Kazakhstan tamin'ny isan'ny mpizahatany tonga tany Male tamin'ny volana Janoary hatramin'ny Mey 2021 taorian'ny Russia, India, Alemana ary Ukraine.